बजार सुधार र विकासका लागि आन्दोलन भइरहँदा पेनिक बन्दै लगानीकर्ता, १८८४.८१ विन्दुमा नेप्से झर्दा नियामक निकाय के गर्दैछन् ? | आर्थिक अभियान
बजार सुधार र विकासका लागि आन्दोलन भइरहँदा पेनिक बन्दै लगानीकर्ता, १८८४.८१ विन्दुमा नेप्से झर्दा नियामक निकाय के गर्दैछन् ?
असार ६, काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमवार पनि शेयर बजार घटेर बन्द भएको छ ।
यस दिन परिसूचक ४९ दशमलव ३१ अंक अर्थात् २ दशलमव ५५ प्रतिशत घटेर १ हजार ८८४ दशमलव ८१ विन्दुमा झरेको हो । यो दिन कारोबारमा आएका २३० ओटा धितोपत्रको ६१ लाख ८६ हजार ९४१ कित्ता शेयर ३६ हजार ४६४ पटकमा रू. १ अर्ब ७५ करोड ६ लाख १७१ दशमलव ४२ मा खरीदविक्री भएको छ ।
बजार सुधार र विकासका लागि आन्दोलन भइरहँदा लगानीकर्ता पेनिक बनेका छन् । सोही कारण सोमवार बजार ठूलो अंकले घटेको छ भने घटेको बजारमा कारोबार रकम चाहीं बढेको छ ।
यस दिनको परिसूचक अघिल्लो बुलिस ट्रेन्ड १ हजार ८८१ विन्दुको वरिपरि आएको हो । यो अवधिमा लगानीकर्ताको अबौंं गुमाएका छन् । साथै अहिले साँवा ब्याज तिर्ने बेला अनि यही बेला बैंकहरुले धमाधम मार्जिन कल गर्दा लगानीकर्ताहरु थप पेनिक भएका छन् ।
त्यस्तै, चर्को ब्याजदर र वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावले पनि बजार प्रभावित भएको जानकारहरु बताउँछन् । पूँजीबजार विकास र सुधारको माग राखी शुरु भएको आन्दोलन जारी छ । हालसम्म पनि नियामक निकायले लगानीकर्ताको माग कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिएका छैनन् ।
यद्यापि यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताले विवेक पूर्ण तरिकाले आफूले लगानी गर्नु पूर्व कम्पनीको आधारभुत पक्ष र प्राविधिक पक्ष राम्रोसँग केलाएर लगानी गरेमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने हुनाले यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
यो दिन कारोबारमा आएका २३० ओटा धितोपत्र मध्ये आँधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था र सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । आँधिखोला लघुवित्तको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा १० प्रतिशत र सिवाईसी नेपाल लघुवित्तको ९ दशमलव ९८ प्रतिशतका दरले वृद्धि भएसँगै सकारात्मक सर्किट लागेको हो ।
त्यसैगरी सोमवार तेह्रथुम पावर कम्पनीको शेयरमूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा १० प्रतिशत घटेसँगै नकारात्मक सर्किट लागेको हो । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ४२२ दशमलव १० मा झरेको छ । त्यसैगरी दोस्रोमा कालिका पावर कम्पनीको शेयरमूल्य ९ दशलमव ३७ प्रतिशत घटेर रू.३४२ दशमलव ५० कायम भएको छ ।
यो दिन प्रभु बैंकको संस्थापक शेयरको रू. ११ करोड ८३ लाख बराबरको सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री भएको छ। त्यसैगरी सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री हुने दोस्रोमा नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी रहेको छ । उक्त कम्पनीको रू. १० करोड ९२ लाख बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
सोनापुर मिनरल्स्को वार्षिक साधारणसभा साउन १५ गते [२०७९ असार, २०]
सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको विशेष साधारणसभा साउन ६ गते [२०७९ असार, २०]